XILDHIBAANAW XAAL QAADO. – Xeernews24
XILDHIBAANAW XAAL QAADO.
16. Mai 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Xildhibaanka shaqadiisu sedex meelood ayay ku soo koobantahay
1- baarlmanka iyo hawlihiisa sida u codaynta sharciada cusub iwm
2- Danta xisbiga uu ka tirsanyahay in uu ilaaliyo oo u difaaco.
3- Dadka uu matalo ee soo doortay danahooga in uu u doodo.
Markaa waxan ka hadlaynaa qaybta sadexaad oo ah ilaalinta danaha dadwaynaha soo doortay ee uu ka wakiilka yahay una dhexeeyoa iyaga iyo dawladda, cabshadoodana gaadhsiiyo dawlda , wixii qaraaro dawladu qaadatoo oo dhib u keenaya shacabkana in uu kaga doodaa baarlamanka dhexdiisa oo uu ilaaliyaa danaha shacabka soo doortay.
Waa in uu had iyo jeer diyaar u yahay in uu la kulmo dhagaystana shacabka dhibka ay kacabanayaan uuna tabiyo cabashadaas mas’uuliyiinta dawladda oo uu u taaganyahay danta dadwaynaha heeganna u yahay dadka uu matalo.
Xildhibaanku waa in uu ogyahay doorka uu ka ciyaaro wax qabadka iyo grab istaagga muwaadinka oo uu ka difaaco waxwalba oo culays saaraya kagana imanayana dhinaca dawldda.marwalba waa in uu dhibaatadiisa gudbiyaa, sababtoo ah waxa uu utaaganyahay in uu is garab taago qof walba oo daa;iradda laga soo doortoo ku nool oo wax ka tabanaya dawladda maxaad u malaynasaa marka shacabka oo dhan ay cabanayaan markaa waa in uu horkacaa shacabka si xuquudooda ay u helaan.
Hadaba xildhibaanada soomaliland gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka selel ma ogyihiin mad’uulitadda saaran,cidda ay matalaan iyo sababta ay ugu jiraan baarlamanka?
Waxaan is leeyahay maya ma oga sababtoo ah waxaad mooddaa in xildhibaanadu is ku haystaan in ay meesha u joogaan dantooda gaarka ah oo ah jeebkaaga naaxi oo iibso codkaaga.
Umana haystaan in la xisaabin karo in ay shaqadoodii ks soo bexeen iyo inkale. Hadaan soo qaadano dhibaatada hadda taagan ee ah qaadashada karaka codbixinta
1- Waxay ahayd in ay kala hadlaan maamulka dawlada arrintan jujuubka ah ee dadka la siiyay muddo aad u gaaban oo suuragal ahayn in ay karaka ku wada qaataan ,waxa haboonayd iyaga oo eegaya dhibaatooyinka dadka haysta ee ay ka mid tahay aabaraha oo waliba uu gobolka sele u dheeratahay dhibaato gaar u ah oo gobollada kale laqabin ahna in lix goobood oo ka mid ah gobolka sele ay xayiranyihiin loona diiday dadwaynihii ku noolaa in ay iska diiwaan galiyaan oo lagu qasbay in aytagaan meelo kale oo ay iska diiwaan galiyaan dhibna ku tahay in ay si dhib yar ku gaadhaan meelihii ay iska diwaan galiyeen si ay u soo qaataan karaka codbixinta oo ay u marayaan dhib iyo rafaad oo xataa ay awoodin in ay gaadiid kiraystaan. Waxaas oo dhib ahi ay u dheertahay ciddii ka hadli lahayd ee codka shicibka meelkasta gaadhsiin lahayd waa xildhibaanada oo aan umalaynayo in ay ku baraarugsanayn mas’uuliyadda saran.
2- Waxay ahayd in ay dadka wacyi galiyaan oo inta aan muddada kaarqaadashada la gaadhin inta ay buurta ka soo dagan dhexyimaadaanna shacabka kuna booriyaan in ay karaka qaataan taana lagama hayo sababto ah xildhibaanadu tallaabaday qaadaanba waa lacag shacabkuna ma bixin karo.
Hadaba waxan leeyahay xildhibaandada waa in la xasuusiyaa in ay shacabka matalaan oo ay doorkooduna yahay ilaalinta danaha dadwaynaha oo aanan iib gali karin waana in ay dhawraan aduunkooda iyo aakhiradoodaba haddii kale waxay noqon doontaa“Adduunyo ka kabo li’id, aakhirana u salaad li’aan”
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/05/salah.jpeg 822 460 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-05-16 23:23:232017-05-16 23:23:23XILDHIBAANAW XAAL QAADO.
Ummad aan ceelna u Qodnayn cidna u maqnayn oo dhulkoogi lagu doontay Marxuun Abubakar Xassan Guuleed oo xarriirad lagu Aassay